Slimbook ndeyegumi: inogadziridzwa kuti ikuunze imwe simba | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook ndeye gumi: kukwidziridzwa kukuunzira iwe mamwe simba
ari akanakisa emabooks aneGNU / Linux pre-yakaiswa kubva kumusika yakagadziridzwa. Slimbook inounza 10th Generation Intel microprocessors kune ako ProX mabhuku ekunyorera. Iwe unogona kunge uchitoziva kuti Intel ichangobva kuburitsa yekutanga "batch" yegumi-chizvarwa machipisi mushure mekupedza makore akati wandei ichivandudza iyo microarchitecture uye nemwedzi yakati wandei vachiivaka muiyo foundry. Slimbook akavatengera vachangodziya kuisa pama laptops avo.
Iine 10th Gen, iyo nyowani Intel Core i7 uye Core i5 (Comet Lake) inosvikawo kune mamwe mamodheru. Kwete chete iwe unogona kuti unakidzwe navo mu Slimbook PROX, zvakare mune iyo PRO BASE, zvese zviri gumi neshanu ne14 shanduro. Izvo, pamwe neiyo nyowani yeLinux 15.x kernels iyo inogona kuvamonyanisa kusvika kuzere, zvinoreva danho rakakura mukuita kwezvikwata izvi zvine yakawanda wachi frequency uye nekuvandudzika mune microarchitecture inouya neIPC iri nani yeaya machipisi.
Iyo PROX chip ichave yave iyo Intel Core i7-10510U inosvika ne4 cores, imwe neimwe iine mukana wekuita shinda mbiri nekuda kweiyo tekinoroji yeHT, kweiyo tambo sere. Uye zvakare, inosanganisira 8MB yeinonzi neIntel Smart Cache, uye frequency ye8 Ghz base, inosvika ku1.8 Ghz neTurbo Boost. Mamwe ese Hardware Hardware acharamba akafanana, kusanganisira kuzviongorora kwakavimbiswa nekambani yeSpain.
Kana zviri zvePRO BASE, iwe uchave wave nekuvandudzwa sehuropi hwako Core i5-10210U uye Core i5-10510U. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti zvikwata izvi zvatova nesitoko, saka unogona kuzviraira kubva zvino kuti usvike pamberi peKisimusi ino.
Nenzira, yei hapana stock ichiri kubva kuProX. Usatombo kunetseka zvakadaro, nekuti ichasvika mumavhiki mashoma. Nekudaro, kana iwe watove wakaraira PROX kare uye isati yapfuura padanho regungano, chishandiso chauri kuzogamuchira chichavawo ne10th Gen chip pasina imwezve mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook ndeye gumi: kukwidziridzwa kukuunzira iwe mamwe simba
Slimbook inoshanda pamwe mukugadzirwa kwe laptop ine mapurani ePowerPC
ExTiX 19.10 ikozvino yave kuwanikwa, zvichibva paUbuntu 19.10 uye neLXQt graphical nharaunda